MACLUUMAADKA COYDOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Coydog iyo Sawirro
Eyga Guriga / Eyo Coyote Hybrid
Sacchetto the Coydog (eeyga gudaha / Coyote isku dhafan)
Coydog ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab u dhexeysa eyga gudaha iyo coyote. Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Qof kasta oo leh iskudhis Coydog waa inuu wax ka baro dabeecadda canine oo hubi inaad fuliso dareenka xayawaanka oo ay weheliso noqoshada hogaamiye baako adag, kalsooni leh markasta.
Magacyada Kale ee Coydog
Hyyo Coyote Dog
Coydog waa isku dhafka u dhexeeya coyote duurjoogta ah iyo eeyga gudaha. Coydogs badanaa waxay leeyihiin indho daloolin leh. Waxaa la sheegaa inaysan guud ahaan ciyaareynin ama banaanka aheyn. Qof kasta oo haya mid ka mid ah eeyadan ayaa u baahan inuu noqdo 100% mid adag, kalsooni leh, hogaamiye xirmo isdaba joog ah. Dadka daciifka ah waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin. Xayawaankani wuxuu u baahan yahay qof fahmaya dabeecadda eyga dabiiciga ah oo la shaqeyn doona dareenka eyga. La'aanta qof ka maskax adag, deggan laakiin si awood leh awood u leh, waxaad ku dambayn doontaa eey si dhakhso leh u qaniinaya xaaladaha cabsida leh ee uu dareemayo hanjabaad, xanaaq ama cabsi. Waxaa laga yaabaa inay ku dambeeyaan cabsi, xishood ama shakhsiyaad cabsi leh. Coydogs ma aha xulasho wanaagsan oo xayawaan rabaayad ah oo dadka intiisa badan ah, maadaama dadka intooda badani aysan aqoon u lahayn dabeecadda dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo / ama aysan lahayn maskax adag oo ay ku qaadan karaan mid ka mid ah xayawaankan.
FIIRO GAAR AH: Qaarkood waxay ku andacoodaan in Coydog uu yahay halyeey reer magaal ah, halka qaar kalena ay ka baryaan inay kala duwanaadaan. Waa xaqiiqo hidde ah in eeyaha, coyotes yeeyduna way is qaban karaan, kadibna waxay soo saari karaan farac waxtar leh, hase yeeshe dooddu waxay tahay, wareegyada isweheshiga ee labada nooc ayaa ku kala duwan: coyotes galaan kuleylka inta u dhexeysa Janaayo iyo Maarso oo waxay leeyihiin cunnooyin bisha Maajo ama Juun, halka inta badan eeyaha guryaha ku jira ay leeyihiin ciyaalkooda xilliga jiilaalka. Aragtidani ma ahan mid caqli-gal ah hase yeeshe, maadaama eyda qaar eygu galaan kuleyl laba jeer sanadkii. Qaar kale waxay dhahaan caadooyinka bulshada eeyga eyga iyo coyote ka dhig suurta galnimada isweydaarsiga naadir. Duurjoog coyotes ma aha in ay u badan tahay in ay saaxiibtinimo la yeeshaan eeyga gudaha waxay u badan tahay in ay cunaan eyga. Coyotes-ka dumarka waxay galaan kuleylka sanadkiiba mar. Tirinta manida labka lab ee Coyote ayaa weli aamusan ama aad u yar sanadka intiisa badan. Guga gu'gu wuxuu kacaa ilaa 2 bilood iyada oo lala kaashanayo wareegga kulaylka dheddigga. Coyotes-ka labka ah waxaa lagu yaqaan inay la joogi doonaan hal dhedig dhan xilli ciyaareedkaan oo dhan waxaana la arkay iyagoo ka caawinaya daryeelka eeyaha. Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal in eyga iyo eyda guryaha ku nool ay isguursadaan. Tusaale ahaan, haddii digaag lab ah uu la xiriiro ey weyn oo dumar ah oo digaag ah oo kuleyl ku jira oo aysan jirin dumar kale coyotes hareeraha in labku la galmoodo, ama haddii eey weyn oo lab ah uu soo gaaro taabasho dheddig keli ah, hiddo ahaan iyo aragti ahaanba waa suurtogal inay soo saaraan qashin eeyo yaryar .
D.Jay Coydog ( coyote / Heeler isku dhafan) qiyaastii 6 bilood jir — D.Jay hooyadiis waa Heeler aabihiisna waa a coyote .
Qoraal ka yimid milkiilayaasha D.Jay Waxaan ku nool nahay 80 hektar Alberta. Waxaan nahay bartanka meelna. Waxaan ugu yeeraa wadanka ALLAH. Ku dhowaad ma jiro dhul u hadhay sida kuweenna oo halkan ah iyadoo qaybo badan oo guryo ah oo leh qiyaastii 2 ilaa 5 hektar la dhisayo. Coyotes ayaa guryahooda uga lumaya xaafadahaan cusub sidaa darteed waxay hadda u guureen dhulkii bannaanaa. Waxaan ku leenahay dad aad u tiro badan coyotes aaggan. Waxaa lagu arkaa maalinti deyrka dadka, taas oo aan caadi u ahayn noocooda. Gaajada ayaa iyaga ka dhigtay kuwo aad ugu dhiirran qaybahayaga. Laakiin halkan Alberta, dadka waxaa loo oggol yahay inay sumeeyaan iyaga oo waliba leh barnaamijyo lagu xakameeyo dadka. Si kale haddii loo dhigo, waa uun hab lagu dilo xayawaankan si dadku ugu soo duulaan deegaanadooda. Kani waa aragtideyda sida kuwa kale ay ila doodi doonaan in eygu yahay xayawaan dabiici ah oo qashinka ka qodo qashinkooda xitaa loo yaqaan dilida xayawaannada yaryar ee qoyska. Waxaan ka helnay cunuggan aadka loo jecel yahay (D.Jay) markii uu qiyaastii 6 toddobaad ka maqnaa deriskeenna, oo runtii ka helay dheddig iyada oo lab ah coyote. Wuxuu la koray 4 caruurteenna ah iyo 4 eeyo kale ah. Isagu waa mid saaxiibtinimo badan oo daacad u ah qoyskeenna. Ma la dagaallamo eeyaha kale laakiin wuxuu leeyahay gaashaamo yaryar oo u gaar ah. Tan iyo markii cunug D.Jay uu godad ka qoday gurigeenna halkaasna uu seexdo habeenkii, had iyo jeerna ku duubmo kubad ciriiri ah (illaa aan ku dhuumaaleeysto guriga si uu ila seexdo xitaa markaa wuxuu ku foorarsanayaa kubad adag oo seexan si dhow dhinacayga). Markuu qof gaardiga ka galo eyda kale ayaa ciyey oo ku ordaya gaariga halka D.Jay uu ku ordi doono guriga gadaashiisa oo uu is qarin doono ilaa uu ka ogaanayo inay tahay qof aan naqaano ama ay amaan tahay in lagu soo laabto guriga hortiisa. Ma aha ilaa markaa in D.Jay soo laaban doono ka dibna dabadiisa la ruxruxo qof walbana dhunkado. In kasta oo aanu qaylin haddana wuxuu leeyahay jilif aad uga duwan ama ka ciyow badan eeyga saafi ah. Waa dhuuban oo sarreeya oo waxay ku dhowdahay majaajilo. Dhamaanteen waan ku faraxsanahay inaan helnay eey u gaar ah sida D.Jay. Waxaan u arkaa inaysan jirin wax ka qurux badan inaan sariirta sariirta la jiifo habeenkii iyadoo daaqaduhu furan yihiin iyadoo la maqlayo qaylada oohinta. Waa dhawaq noocan oo kale ah. '
D.Jay Coydog ( coyote / Heeler jir) qiyaastii 6 bilood jir
Sacchetto the Coydog (eeyga gudaha / coyote Waxaa la helay iyada oo laga tagay loona tagay in ay ku dhinto bac kadib markii ay jirtay 2 bilood oo kaliya. Milkiilaheeda ayaa leh, Lamaane da 'yar oo lugeynaya eygooda (reer Afgaanistaan ​​ah) oo ku nool West LA ayaa ag maray bac balaastik ah oo wadada dhexdeeda ah ka dibna way hubiyeen oo way heleen. Sacchetto macnaheedu waa 'boorso yar' oo Talyaani ah (badanaa bac balaastik ah). Halkan Los Angeles sida muuqata waa wax weyn inaad u keento adhijirradaada dheddigga ah ee kuleylka ku jira ilaa buuraha Hollywood oo aad halkaas uga tagto iyada oo xiran si ay ula kulanto coyote lab ah. Waxay leedahay shakhsiyadda guud ee coyote-inkasta oo aysan ahayn indhaha daloolin. Waxay si aad ah uga xishoonaysaa uguna xishoonaysaa CIDNA aniga mooyaane. Lugaha gadaasheeda ayaa u kala baxa dhinaca marka ay ordayaan, iyo sida Coyotes. Way ka caqli badan tahay sida ay xitaa ka warqabto. Xitaa ma sharixi karo, laakiin iyadu waa caqli badan tahay. Waxaan sidoo kale haystaa Doberman oo aad u caqli badan, sidoo kale, laakiin waxba marka la barbar dhigo Sacchetto. Nasiib darrose, waxay umuuqataa inay qaadatay miskaha Shepherd Jarmal iyada ah, maadaama laga helay cudur daran oo misigta ah oo aad u xun bishii Diseembar ee la soo dhaafay. Acupuncture wax badan ayey caawineysaa, sidaas oo kale ayaa cunnada ceyriinka ah ee aan dhammaantood ugu beddelay. Dhaqtarkayga guud / reer galbeedka ayaa soo jeediyay in maadada ku jirta iyada darteed, ay u badan tahay inay sifiican ugu wanaagsanaan doonto cunnada ceyriinka ah. Marka dhamaantood waan badalay (waxaan haystaa xirmo 4 ah). '
ridgeback muqisho labrador cross for sale
Aiko the Coydog (Coyote / German Shepherd Dog mix) oo 7 jir ah— 'Aiko wuxuu ku dhashay Texas ka dib markii xoogaa coyotes ah ay soo galeen oo ay la seexdeen adhijirro Jarmal ah oo saafi ah. Kibiriyayaashu (ninkay eeddadiis iyo adeerkiis) may rabin dhallaanka isku dhafka ah ee isku dhafan sidaa darteed waxay siiyeen coydogs, Aiko ayaa nala siiyay. Iyadu waa macaan tahay sida ay noqon karto. Waxay si wanaagsan ula dhaqantaa eeyaha kale, laakiin uma ciyaareyso sida eeyga dhaqameed ee soo jireenka ah, tusaale ahaan ma soo doonato ama xiisayso alaabada ay ku ciyaaraan haba yaraatee. Waxay jeceshahay inay ku oroddo ardaaga oo ay cayrsato eeyga 'walaalkeed'. Waxay ku raaxeysataa urinta wadada dilka waxayna noo soo celisaa 'hadiyado' in ka badan inta eyga kale sameeyo. Waxay la jaanqaadi doontaa sida oohinta markaan sameyno. Xitaa waxaa jirta hees aan qornay oo ku saabsan baroor, waxaan ku tababarnay inay cabaaddo inta heesta socoto hadana waxay biloowdaa baroor isla marka ay heesta bilowdo! Iyadu waa mid si wanaagsan u dhaqan leh oo aad u 'macaan'. Dad badan ayaa leh waxay u egtahay dawaco. Aad baan u jecel nahay iyada!
Aiko the Coydog (Coyote / German Shepherd Dog mix) oo jira 7 sano
'Waxaan marki uhoreysay ka helnay Axle South Dakota meel banaan ah. Axle wuxuu ahaa dhammaan maqaarka iyo lafaha, wuxuu lahaa dixiriga sidoo kale. Waxaan geynay dhakhtar dhaqtar maxalli ah waxaana naloo sheegay inuu noqon karo coydog maadaama loo malaynayay inuu ku badanyahay aagga. Axle wuxuu ka baqayaa eeyaha kale laakiin wuu kululaanayaa booqashooyin yar kadib. Dabadiisa ayaa sidoo kale ku xirtay. Wuxuu aad ugu fiicanyahay maqalka sidaa darteed sifiican uma hubo inuu isku dhex qasmay iyo inkale Adhijirka Jarmalka ama casaan Heeler . Waxaan ka helay sawir websaydh ah eey magaciisu yahay Aiko oo u eg isaga oo kale, kaas oo ahaa isku dhafka Jarmalka Shepherd coyote. Axle runtii waa eeyga ugu fiican ee aan waligeen soo aragnay, cunug weyn, cajiib ah xarigga. '
'Waxaan ka qaatay Lanto lacagtayda maxaliga ah markii uu jiray seddex bilood (hada waa 5 bilood) waxaana la igu wargaliyay inuu yahay Soohdinta Collie isku dar. Waxay ahayd ilaa seddex usbuuc kadib markaan ogaaday waxyaabo aan caadi aheyn oo ku saabsan isaga inaan dib ugu laabto poundka si aan isugu dayo inaan macluumaad dheeri ah uga helo. Waxay noqotay in milkiilayaashiisii ​​hore ay leeyihiin haween Xudduud Collie ah oo la seexata coyote kaas oo baadhayay hantidooda muddo bilo ah. In kasta oo ay ahayd wax laga xumaado inaysan ii sheegin tan markii aan korsaday, waan ku faraxsanahay inaan awoodo inaan sharxo habdhaqankiisa. Lanto had iyo jeer wuu ka shakisan yahay dadka, wuxuu ku dhuumaaleysanayaa koonayaasha, si kasta oo aan isku dayo is dhexgal isaga. Isaguna wuu qayliyaa ama soo boodaa halkii uu ka ciyo. Weli ma maqal isaga oo ciyey. Wuxuu leeyahay dhago waaweyn oo waaweyn iyo indho jaalle ah sida coyote oo aan hadda ku jeclaaday.
In kasta oo fiiro gaar ah loo leeyahay coyotes hel Lanto ma siin lahaa adduunka. Isagu waa jacayl iyo caqli badan, ka caqli badan eey kasta oo kale oo aan abid leeyahay. Waxaan ku noolahay laba hektar oo dhul xayndaab ah wuxuuna ku fiican yahay joogitaanka guriga. Wuxuu jecel yahay inuu ku ordo isagoo eryanaya jiir yaryar (mararka qaarkood wuxuu keenayaa hal guri oo wuxuu ku dhacayaa cagahayga hadiyad ahaan aniga) iyo digaagga digaaga ee ku sii qulqulaya daaradda. Lanto waxay u baahan tahay gacan adag laakiin taasi waa mid la filan karo. Had iyo jeer waa inaan u sheegaa yaa alfa , laakiin isagu waa u qalmaa dadaalka. Waan jeclahay Coydog-ga yar waxaanan indhaha ku hayaa inaan daawado isaga oo u koraya saaxiibka nolosha dheer. '
Eeg tusaalooyin badan oo Coydog ah
Sawirada Coydog 1
Liiska eeyaha eyda ee loo yaqaan 'Coyote Mix Breed'
buuxa muqisho heeler buluug dilaa ah
adhijir Jarmal basset hound mix
eey Imperial Shiinaha for sale
somali bulldog boston terrier mix